Home Wararka Midowga Yurub oo walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya & Saameynta howlgalka Burcad...
Midowga Yurub oo walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya & Saameynta howlgalka Burcad Badeeda
Howlgalka Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Waqtiga Doorashada lagu soo gabagabeynayo iyo xaaladaha ku gedaaman Mustaqbalka Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay ku xiran tahay Mustaqbalka howlgalka la dagaalanka Burcad Badeeda, welwelka ayaa yimid maadaama dhammaadka waqtiga lagu soo gabagabeynayo Doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka in ay ku beegan tahay maalmo kaddib marka uu idlaanayo waqtiga howlgalkaan.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa December 2021 saddex bil oo ku eg March 2022 ku kordhiyay howlgalka la dagaalanka Burcad Badeeda Soomaalida oo socday 14kii sano ee lasoo dhaafay si loosoo afjaro weerarada qafaalka Maraakiibka Ganacsiga & kuwa Dalxiiska oo kooxahaan ay ka heleen dhaqaale badan.
Weerarada Burcad Badeeda Soomaalida ayaa hoos u dhacay waana sababta keentay in lasoo gaabiyo waqtiga howlgalka NavFor si muddada kooban ee lagu daray lagu qiimeeyo xaaladda Soomaaliya oo ku xiran ilaalinta dhanka Bariga oo Burcaddu kasoo abaabusho qorshaha qafaalka Maraakiibta.
Qoraalka ayaa lagu caddeeyay in April 2021 muddo kordhinta labada sano uu saxiixay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kordhisay khilaafaadka siyaasadeed ee Gudaha, Is faham darrada Xafiisyada Madaxweynaha & Ra’iisul Wasaaraha sii murjiyay xaaladda cakiran ee Soomaaliya sida lagu muujiyay qoraalka.
Miowga Yurub ayaa si cad u sheegay in is qabqabsiga siyaasadeed ay fursad u noqotay Al-Shabaab maadaama gaabis uu ku yimid howlgalka ka dhanka ah, waxa uu soo jeediyay in ugu yaraan loo waqti kordhiyo 9 bil oo kale si howlgalkooda Geeska Afrika loo xaqiijiyo sida loo dhigay qoraalka.
Khilaafka siyaasadeed ee Farmaajo & Rooble oo soo ifbaxay September 2021 ayaa ka dhasha kiiska Ikraan Tahliil, tallaabadii dhacdadaas la xiriirtay ee xil ka qaadista Agaasimihii NISA, Diidmada Farmaajo & tallaabadii ugu dambeysay ee dhacday 27kii December 2021 oo XFS ku sheegtay in ay ka badbaaday Afgambi Villa Somalia la damacsaneed.
Previous articleAl Shabaab oo sheegtay inay weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya
Next articleQaraxyo xalay ka dhacay magalaada Boosaaso
Somaliland oo jawaab adag ka bixisay ashkato Somaliya u gudbisay Kenya
Xildhibaano Soomaaliyeed oo haysto dhalashada Ingiriiska oo laga gudbiyay dacwad maxkamadeed